डोनेट गर्नुहोस् - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
कोलोराडो गिभ्स डेमा जेफरसन सेन्टरमा चन्दा दिन मौका पाएन? तपाइँको उपहार गणना गर्न अझै समय छ!
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छन् र तपाईसँग अरुको जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन गर्ने शक्ति छ।
हरेक वर्ष, जेफरसन सेन्टरले illness 34,000,००० भन्दा बढी बच्चाहरू र उनीहरूको परिवार, वयस्कहरू, र वयस्कहरू जो मानसिक रोग, भावनात्मक समस्याहरू, र पदार्थ प्रयोगका मुद्दाहरूसँग स .्घर्ष गर्दछन्। तर हामी यो एक्लै गर्न सक्दैनौं।
राज्य, संघीय र अनुदान कोषले हाम्रो ढोकाबाट आउने सबैलाई प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवा र पदार्थ प्रयोग उपचार प्रदान गर्न सम्बन्धित सबै लागतहरू समेट्दैन। एक नाफामुखी, कर छुट संस्थाको रूपमा, हामी हाम्रो समुदायको समर्थनमा निर्भर गर्दछौं।
जेफरसन केन्द्रमा, हामीलाई थाहा छ कि मानसिक रोग र लतबाट मुक्त हुन सम्भव छ। तपाईको उदारताले सबै उमेरका मानिस र जीवनका सबै क्षेत्रका मानिसहरूमा आशाको उत्प्रेरणा दिन सक्छ, मानसिक बिमारीको साथ जिउँदो छ र हरेक बिहान एक उत्तम दिनको सपना देख्दै, घर बोलाउने ठाउँ, जागिर, सम्भावनाको मौका)।
COVID-19 समर्थन कोषमा योगदान दिनुहोस्
COVID-१ health स्वास्थ्य संकटको जवाफमा, हामीले हाम्रो अपरेशन र सेवा डेलिभरीमा द्रुत र महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेका छौं ताकि हामी हाम्रा ग्राहकहरू र हाम्रो समुदायमा जडित रहन सक्दछौं। हाम्रा धेरैजसो कर्मचारीहरू टाढाबाट काम गरिरहेका छन् र हेरचाह फोन र भिडियो मार्फत पहुँचयोग्य छ। यी परिमार्जनहरू अवश्य पनि, बकबक र महँगो छन्, यद्यपि हामी हाम्रो सञ्चालन सम्भव भएसम्म थोरै अवरोधको साथ सञ्चालन गर्न लिने जुनसुकै कार्य गर्न कटिबद्ध छौं ताकि हामी आफ्नो समुदायको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन सक्दछौं। हामी तपाईंलाई जेफरसन सेन्टरलाई उपहार दिन आज यी अनियोजित खर्चहरूको अफसेट गर्न सहयोगको लागि आग्रह गरिरहेका छौं। जब तपाईं जेफरसन केन्द्रमा चन्दा दिनुहुन्छ, तपाईं हाम्रो समुदायलाई निको पार्न मद्दत गर्नुहुन्छ।
दान गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् "COVID-19 समर्थन कोष।" कुनै उपहार रकमलाई यति धेरै सराहना गरिन्छ कि हामीलाई यो संकटमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। सँगै, हामी यो मार्फत प्राप्त गर्नेछौं।
एक मासिक उपहार तालिका
हेरचाह प्रदान गर्न हाम्रो वर्ष-प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता को भावना मा, हामी तपाइँलाई मासिक दाताहरूको हाम्रो समुदाय मा सामेल हुन आमन्त्रित गर्दै छौं, आशामा साझेदारहरू, मात्र $ १२, $ २,, वा $ of$ को मासिक उपहार शेड्यूल गरेर। को रूप मा आशामा साझेदारहरू दाता, तपाईं मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको साथ संघर्ष गर्नेहरूलाई निरन्तर समर्थन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आज तपाइँको मासिक उपहार अनुसूची गर्न! प्रश्नहरू? हेर्नुहोस् FAQ हरू यहाँ छन्.
O बनाउनुहोस्ne- समय उपहार
तपाईंको उपहारको आकार फरक पर्दैन, तपाईंको उदारताले मानसिक स्वास्थ्य वा पदार्थ प्रयोग गर्ने चुनौतीहरूको साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको जीवनमा वास्तविक फरक पार्छ। तपाईको डोनेशनलाई तपाईको डोनेसलाई निर्देशनको आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहिन्छ, तपाईको छनौट को एक विशिष्ट कार्यक्रम को लागी, वा हाम्रो एन्डोमेन्ट कोष समर्थन गर्न को लागी निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो उपहार मेल गर्न चाहानुहुन्छ भने, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रिन्ट गर्नुहोस् दान फारम.
अनलाइन दिनको लागि क्लिक गर्नुहोस् अब दान गर्नुहोस् माथिको बटन।
पाठ सन्देश मार्फत दिन जेफरसन लाई 56651। तपाइँको दान गर्न प्रम्प्टहरू पालना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो उपहार मेल गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं यसलाई डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ दान फारम.
जेफरसन केन्द्रलाई सहयोग गर्ने अन्य तरिकाहरू
योजना बनाइयो - धेरै व्यक्तिहरू तिनीहरूको इच्छा वा सम्पत्ति योजनामा ​​परोपकार गर्न उपहार छनौट गर्दछन्। तपाईंको ईच्छे, परोपकारी वार्षिकी, जीवन बीमा, पूल गरिएको आय कोष, वा परोपकारी ट्रस्टहरू मार्फत जेफरसन सेन्टरलाई उपहार दिन कृपया क्रिस्टा लुइसलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। KristaL@jcmh.org वा 303-432-5034।
साझेदारी अवसरहरू - यदि तपाईं विशेष घटना वा विशेष कार्यक्रम प्रायोजित गरेर हाम्रो कामलाई समर्थन गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, क्लिक यहाँ २०२१ पार्टनरशिप अवसरहरू हेर्न वा जुलीमा सम्पर्क गर्न JulieD@jcmh.org वा information०303-२432-5644-XNUMX अधिक जानकारीको लागि।
नियोक्ता मिलान - धेरै रोजगारदाताहरूले आफ्नो कर्मचारीहरू, सेवानिवृत्त र परिवारका सदस्यहरूको लागि परोपकारी संस्थालाई चन्दा मिल्दछन्। तपाईको मानव संसाधन विभागको साथ जाँच गर्नुहोस् कि तपाईको रोजगारदातासँग मिल्दो उपहार प्रोग्राम छ कि छैन।
Amazon Smile - यदि तपाईं नियमित अमेजन शपर हुनुहुन्छ भने, अमेजन मुस्कान प्रोग्राम जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको छनौटको दानको रूपमा जेफरसन सेन्टर छनौट गरेर, हामी तपाईंको खरीद मूल्यको एक अंश तपाईंलाई कुनै अतिरिक्त लागतमा प्राप्त गर्नेछौं। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ थप जानकारीको लागि र सुरू गर्न।
राजा सोपर समुदाय पुरस्कार - तपाईंको सोपरकार्डलाई जेफर्सन सेन्टरमा तपाईंको रोजाइको संस्थाको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् र तपाईंको दैनिक किराना शपिंगले तपाईंलाई कुनै मूल्य तिर्न सहयोग पुर्‍याउँनेछ! क्लिक गर्नुहोस् यहाँ अधिक जानकारी को लागी र तपाइँको कार्ड दर्ता गर्न को लागी।
रिफन्ड कोलोराडो - यस कार्यक्रमले तपाईंलाई हिस्सा दिन वा तपाईंको राज्य आयकर फिर्ताको सम्पूर्ण दिन हाम्रो कामको लागि सहयोग पुर्‍याउँछ! तपाईंको ट्याक्स रिटर्न सफ्टवेयरको राज्यको भागमा, कोलोराडो गैर-नाफामुखी संस्थालाई दान गर्न प्रोम्प्ट खोज्नुहोस् र हाम्रो दर्ता नम्बर २०० 20033002130००२०XNUMX० प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कर जादू - कर जादू एक अनलाइन कर तयारी र फाइल गर्ने सेवा हो जुन फिर्ता दिन्छ! तपाईंको साधारण वा जटिल करहरू one २ of को एक कम दरको लागि पूरा गर्नुहोस् र ट्याक्स म्याजिकले जेफरसन सेन्टरलाई $ don दान गर्नेछ। तपाइँलाई कुनै अतिरिक्त लागत बिना जब तपाईं फाइल गर्नुहुन्छ। क्लिक गरेर जेफर्सन सेन्टरलाई तपाईको रोजाईको दानको रूपमा छनौट गर्नुहोस् यहाँ.
एक in-Kind दान दिनुहोस् - हाम्रा धेरै ग्राहकहरू आधारभूत आवश्यकताको खाँचोमा छन्। तपाईंको विनाशकारी खाद्य वस्तुहरूको व्यक्तिगत उपहार र व्यक्तिगत देखभाल उत्पादनहरू ग्राहकलाई नि: शुल्क वितरण गरिन्छ। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सुझाव गरिएका वस्तुहरूको सूचीको लागि। दान गर्न, कृपया जुलीलाई यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् JulieD@jcmh.org वा 303-432-5644।
संलग्न हुनुहोस् - जेफरसन केन्द्र समर्थन गर्न वैकल्पिक तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईं कसरी सामेल हुन सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् यहाँ.